Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umanyano olukhokelwa yingingqi enkulu yaseJapan uHitachi iphumelele ubunini kunye namalungelo okusebenza kwezixhobo zokuhambisa umbane zeprojekthi ye-1.2GW Hornsea One, eyona fama yomoya inxweme inkulu esebenza ngoku. Umanyano, olubizwa ngokuba yiDiamond Transmissi ...
Iindidi zamandla omoya
Nangona zininzi iintlobo zeeinjini zomoya, zinokushwankathelwa zibe ziindidi ezimbini: ii-injini zomoya ezithe tyaba, apho i-axis ejikelezayo yevili lomoya ifana nomoya oya kwicala lomoya; ii-injini zomoya ezime nkqo, apho i-axis ejikelezayo yevili lomoya ijikeleze kwi-gr ...
Zeziphi ezona zinto ziphambili kumatshini womoya
I-Nacelle: I-nacelle iqulethe izixhobo eziphambili zomoya ojikelezayo, kubandakanya iibhokisi zegiya kunye neejenereyitha. Abasebenzi besondlo banokungena kwi-nacelle kwinqaba yeinjini yomoya. Isiphelo sasekhohlo se-nacelle yirotor yomvelisi womoya, ezizezi iirolor blades kunye neshafti. Iijikelezo zeRotor: ca ...
Amandla omoya amancinci ombane wamandla ombane
Ibhekisa kwinkqubo yemveliso yokuguqula amandla ombane, ifossil fuel (amalahle, i-oyile, igesi yendalo) amandla ashushu, amandla enyukliya, amandla elanga, amandla omoya, amandla e-geothermal, amandla olwandle, njl. ekuthiwa kukuveliswa kwamandla. Isetyenziselwa uku ...
Ngaba iinjini yomoya ivelisa enye ngoku okanye yangoku ethe ngqo?
Iinjini yomoya ivelisa enye into etshintshayo ukuya kuba amandla omoya engazinzanga, imveliso yombane wamandla omoya yi-13-25V etshintshayo yangoku, ekufuneka ilungisiwe kwitshaja, emva koko ibhetri yokugcina ihlawulisiwe, ukuze amandla ombane aveliswe. ngamandla omoya ge ...
Uvavanyo lokuthembeka kweinjini yomoya
Abathengisi bamacandelo oomatshini bomoya kufuneka benze uvavanyo olusesikweni ukuqinisekisa ukuthembeka kwezixhobo. Kwangelo xesha, ikwafuneka ukuvavanywa kwendibano yokuvavanywa kweeinjini zomoya. Injongo yovavanyo lokuthembeka kukufumana iingxaki ezinokubakho kwangoko kwaye wenze ...